ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးဖြုန်းတီးနေသောသင်၏အိမ်ကိုမည်သို့လွှမ်းမိုးနိုင်မည်၊ သင်၏အသံဖြင့်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခြင်း Gadget သတင်း
ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြုန်းတဲ့သင့်အိမ်ကိုဘယ်လို domotize လုပ်ရမယ်
Rafa Rodríguez Ballesteros | | နေအိမ်အလိုအလျောက်, နေအိမ်
ကျနော်တို့အကြောင်းကြားတဲ့အခါ နေအိမ်တည်နေရာ သို့မဟုတ်ငါတို့ပိုင် domotize ရန်, ငါတို့မတိုင်မီသောစှဲပေးသည် လူတိုင်းမရရှိနိုင်သည့်အရာ။ အိမ်မှအလိုအလျောက်တည်ဆောက်ခြင်းကိုမြေပြင်မှတည်ဆောက်ခြင်းသည်နည်းပညာနှင့်ကိရိယာများကိုချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးစေနိုင်သည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ချက်ချင်းလက်ငင်းအစီအစဉ်များသည်သင်၏အိမ်အသစ်ကိုယခုအခါစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုပါကဤစာမူသည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါ။
အနာဂတ်အလိုအလျောက်အိမ်ကိုအလိုအလျောက်မြင်သောသူအတွက်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်သင်၏အိမ်ကိုမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများမှာစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကျွန်တော်တစ် ဦး «ချိတ်ဆက်»အိမ်မှာရေတွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အသုံးပြုနိုင်ပါ သင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများကိုမှာယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏အသံပင်ဖြစ်သည် ပိုပြီးအခြေခံကျတာကသင်ယုံကြည်တဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်တာကမင်းတတ်နိုင်တာတစ်ခုပဲ။
2 တစ် ဦး «တန်ဖိုးနည်း»အိမ်မှာအလိုအလျောက်များအတွက်အခြေခံဒြပ်စင်
မင်းသေချာပေါက်ကြားဖူးတယ် စမတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ။ ဒါပေမဲ့သင့်အိမ်ကသူတို့ကိုသုံးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကော။ သုံးစွဲသူအမြောက်အများအတွက်ပုံမှန်အစဉ်အလာမှာအိမ်တစ်လုံးရှိသည်။ Y အိမ်တလုံးကိုအလိုအလျောက်စဉ်းစားခြင်းသည်အလွန်စျေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဖြစ်ကောင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က, စျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာသိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မလုံလောက်ဘူး။
ဒီနေ့အခြေအနေတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားပြီ, ကောင်းဘို့အတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်ထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသောစာရင်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကား, စေသည် ကမ်းလှမ်းမှုကိုစားသုံးသူများအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်။ အမျိုးမျိုးသောအခြားနည်းလမ်းများတည်ရှိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည် တကယ်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာထုတ်ကုန်.
နောက်ထပ်တစ်ခု လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတွေ့ရှိသော "Hitches" သေးငယ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အိမ်မှာ။ အိမ်သုံးအလိုအလျောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်ကိုယ်ထိလက်ရောက်တပ်ဆင်ရပါမည် ထိုကဲ့သို့သောအုတ်များသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အဖြစ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများငှားရမ်းပါဝင်သောအသုံးပြုသောအသေးစားစီမံကိန်း၏ကွပ်မျက်။ ကံကောင်းထောက်မစွာအိမ်တစ်ခုလုံးကို domotize ရန် ဒီပြီးသားသမိုင်း၌ဆင်းသွားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည့်ကိရိယာများအပြည့်အဝရှိသော်လည်းအိမ်တွင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ဤအရာများသည်မလိုအပ်ပါ။
ထို့နောက်ကျွန်တော်အကြံပြုသွားပါမည် များစွာသောရိုးရှင်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အားလုံးတို့၏ဈေးနှုန်းချိုသာစွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့်သင်၏အိမ်ကိုခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် comm ည့်ခန်းရှိမီးများကိုပိတ်ထားရန်သို့မဟုတ်အပူကိုဖွင့်ရန်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုလိုပါကအသံအမိန့်ပေးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကိုဂရုပြုပါ။ ငွေစုဆောင်းစရာမလိုဘဲသင့်တွင်လူ ဦး ရေထူထပ်သောအိမ်တစ်လုံးရှိစေချင်ပါသည်။
တစ် ဦး «တန်ဖိုးနည်း»အိမ်မှာအလိုအလျောက်များအတွက်အခြေခံဒြပ်စင်
လိုအပ်သောကိရိယာများကိုရှာဖွေရန် ငါတို့အိမ်ကို ၂၁ ရာစုအိမ်အဖြစ်ပြောင်းဖို့ပေါ့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်စတင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်၌သီးခြားလွတ်လပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးကိုစမတ်ဖုန်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်၏ချိတ်ဆက်ထားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သော "ကွန်ယက်တစ်ခု" ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်.
ဒီလိုလုပ်ဖို့, အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ "ဦး နှောက်" ရှိတာကကောင်းပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ပြောနေတာ စမတ်ပီ။ un ကျန်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အရာနှင့်အတူ« bridge » gadget, အချို့အလိုအလျောက်လည်ပတ်စေခြင်းငှါပေမယ့်။ စမတ်စပီကာစက်မှုလုပ်ငန်း၌တည်၏ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါတို့သင်တို့ကိုအကြံပြုသွားကြသည် အကောင်းဆုံးဝေဖန်သူများနှစျယောကျ အသုံးပြုသူများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
Es ကြီးမားသော« G »၏ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသောစျေးအသက်သာဆုံးထုတ်ကုန်။ တစ် ဦး ကအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့စပီကာများနှင့် ကျနော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အရာကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ရှိပါတယ် Bluetooth, MP3 နှင့်သင်တန်း၏ ဆက်သွယ်မှု ဝိုင်ဖိုင်။ ရိုးရိုး OK OK GOOGLE ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်တော်သည်ဟုယူဆသောအမိန့်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေဇုန် option ကို။ Google နှင့်တူသောဈေးနှုန်းကိုဝိုင်းရံထားသည် သူတို့ပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သုံးနိုင်တယ် အိမ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ညှိနှိုင်းရန်, ငါတို့ယခင်က configure ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, အားလုံးလိုအပ်သောအမိန့်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည် Alexa ကိုအမြဲတမ်းငါတို့စွန့်ပစ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်.
3rd Generation Echo Dot ရရှိရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုနိုင်သောအရာကိုရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့တန်ဖိုးနည်းအိမ်မှာအလိုအလျောက်ကွန်ယက်၏စစ်ဆင်ရေးစင်တာ။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်တည်နေရာကိုရရှိရန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာယခုအချိန်အထိအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမိန့်များကို“ စောင့်ကြည့်” ပြီးသင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အချိန် ကျနော်တို့အများဆုံးအသုံးဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူ။ သို့မဟုတ်အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ထုတ်ကုန်များရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမီးသီးတစ်လုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနိုင်သည်။ အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းအများအပြားရွေးချယ်စရာ.
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအိမ်များအားလုံး၌ရှာတွေ့သည့်အခြေခံနှင့်မဖြစ်မနေဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ငါတို့လိုချင်တာကငါတို့ကို "domotize" လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အသုံးအ ၀ င်ဆုံးနှင့်စျေးသိပ်မကြီးသည့်ကိရိယာများအနက်မှတစ်ခု။ ကြောင်းဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး ကမီးသီး စမတ်ဖုန်းနှင့်စပီကာဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည် အသိဉာဏ်
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်, ဥပမာ, တစ် ဦး စာဖတ်ထောင့်သည် ငါတို့အလင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်အတွက်။ ဒါမှမဟုတ်ရန် ကလေးတွေရဲ့ကစားခန်း။ မီးသီးတစ်လုံးတည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိပ်များနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့များများသိမ်းဆည်းထားလျှင်၊။ အမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ဟုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုသံသယမရှိဘဲ။
ဒီမှာ Amazon မှာ Wifi မီးသီးတစ်ခုရွေးပါ
ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် ကျနော်တို့ကရိယာများအသုံးပြုလမ်းအတွက်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် mark နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆက်စပ်ပစ္စည်း အိမ်မှာ။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောစက်ကိရိယာ မကြာသေးမီကမမြင်နိုင်သည်တိုင်အောင်အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်စရာဖွင့်လှစ်။ နှင့် wifi ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူစမတ်ပလပ် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားသောမည်သည့်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိုမဆိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဒါဟာရှုပ်ထွေးပါတယ်နှင့်စျေးကြီးအပေါ်ရေတွက် တစ်အိမ်မှာအလိုအလျောက်အပူပေးစက်ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နိုင်တဲ့လျှပ်စစ်ကော်ဖီဖျော်စက် ဒါကြောင့်နံနက်ယံ၌ကိုယ်နှိုက်ကပထမ ဦး ဆုံးအရာတက်ကြွစွာနိုင်အောင်။ အခု ရိုးရိုး plug ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကရိယာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပီကာကတဆင့်၊ အဲဒါမယုံနိုင်စရာလား။
အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီအပူပေးစက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ မှောင်မိုက်အလင်းမှစတင်သည်သည့်အခါကျန်ကြွင်းသောအရပ်အလင်းအိမ်ကိုသက်ဝင်။ ဒါမှမဟုတ်တောင်မှ activate လုပ်ပါ အိပ်ရာထဲကရေနွေးအိုး ကျနော်တို့နိုးလာသောအခါရေပူရှိသည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းလက်တွေ့ကျကျသေးငယ်ပြီးစျေးပေါသောဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် တပ်။ ရသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ပြီးတော့ပိုပိုပြီးဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်လုပ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေကကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သမျှသောခြေစွပ်များကြီးထွားစေသည်
ဒါဟာသက်သေပြခဲ့သည် အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းများမှကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်နိုင်သမျှကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အလွန်သေးငယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လူ ဦး ရေထူထပ်တဲ့အိမ်တစ်လုံးရနိုင်ပါတယ်။ Google သို့မဟုတ် Amazon ၏ "OK Google" သို့မဟုတ် Alexa ၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည်။ ကြွင်းသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်းစားပြီး၎င်းတို့ကိုသက်သောင့်သက်သာဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်နှင့်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ အများဆုံးပကတိလမ်းအတွက်။ သင်လက်လှမ်းမီနိုင်လျှင်အိမ်တစ်လုံးကို Domomize လုပ်ပါ။ ဒီနည်းပညာကပေးတဲ့သက်သောင့်သက်သာရှိမှုကိုမည်သည့်အိတ်ထဲမှမရောက်နိုင်ပါ။ စပီကာသေးသေးလေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြုန်းတဲ့သင့်အိမ်ကိုဘယ်လို domotize လုပ်ရမယ်
Ring Indoor Cam၊ အိမ်သုံးအသုံးပြုရန်အတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောလုံခြုံရေးကင်မရာ
Galaxy 20 Ultra နှင့် iPhone 11 Pro Max တို့ဖြစ်သည်